गालीबाट म विचलित भएको छैन : घनश्याम भुसाल - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home अर्थ गालीबाट म विचलित भएको छैन : घनश्याम भुसाल
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले गालीबाट विचलित नभएको बताएका छन् । मन्त्री भुसालले ४० औ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भुसालले इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको उल्लेख गर्दै गालीबाट विचलित नभइ आफु अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा पनि हरेक वडामा एकजना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य शर्त भएको बताए ।
मन्त्री भुसालले खाद्य बाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकोले संविधानले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको बताए । स्वास्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न अझ धेरै बाँकी रहेको बताए । मन्त्री भुसालले त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरुले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभइ समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता बताए । उनले भने,‘म मन्त्री भएर आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग राय सुझावका लागि ८ सयभन्दा बढीसँग भेट गरेँ तर अधिकांश कृषि विज्ञको सोचाइ असाध्य प्राविधिक छ, माटो विज्ञ माटोमा मात्रै केन्द्रित भएको छ, कीट विज्ञ त्यसैभित्र हराएका छन्, । यसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुनसक्दैन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समग्र कृषिको सुधार हुने गरी सोच्नुपर्छ, ’मन्त्री भुसालले भने ।
मन्त्री भुसालले उत्पादनमा मात्र जोड नदिई वितरणमा समेत उत्तिकै जोड दिए उत्पादन भएको खाद्यान्न समान रूपमा वितरण हुने बताए ।
अब फरक तरिकाले खेती गर्नुपर्छ
खाद्यका लागि कृषि अभियनता उद्धव अधिकारीले कृषि विकासको लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए । उनले रासायनक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्ने तर्फ लाग्नाले कृषिलाई जंघारतिर धकेलिरहेको बताए । उनले वर्षेनी कृषि उपजको आयात उच्च हुने हो । कृषि प्रधान भनेर चिनिने देशलाई कृषि उपज आयात गर्ने देश भनेर चिनिने बताउँदै रासायनिक खेती गरेर पनि उत्पादन नबढकोले अब प्रांगारिक खेतीतर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले रासायनि मल प्रयोग गरेपनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयलमा प्रांगरिक कृषि प्रवद्धनका लागि कार्यदल गठन भएपनि केही काम हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रांगरिक कृषिका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको पनि थियो । अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।’
कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेलले ४० आंै विश्व खाद्य दिवसको साताव्यापी अभियानले विद्यमान खाना र खेतीपाती प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुृपर्ने विषयलाई थप उजागार गरेको बताए । साताव्यापि कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषिसँग सम्वन्धित १४ वटा सम्वाद भएको र २६० जनाले टिप्पणी गरेको उनले जानकारी गराए । उक्त कार्यक्रमका लागि चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र केही रकम बचतसमेत भएको उनको भनाइ छ ।
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - October 22, 2020 0
भर्खरै प्रशान्त वली - October 21, 2020 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 21, 2020 0
कौशिला कुँवर - June 4, 2020 0
राजधानी समाचारदाता - June 30, 2020 0
काठमाडौ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मंगलवार मन्त्रालयमा छड्के निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईले आफु मातहत रहेको संस्कृति पर्यटन तथा...
विदेश रासस/सिन्ह्वा - February 14, 2020 0
इस्लामाबाद । अमेरिकाले भारतलाई प्रतिरक्षा प्रणालीको बिक्रीलाई अनुमोदन गरेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पाकिस्तानले अमेरिकी...
बिचार नन्दनप्रसाद अधिकारी - June 27, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले...
राजनीति महेश्वर गौतम - August 21, 2020 0